Dagaal Ka Dul Socda Markab Ku Soo Caariyay Mid Kamid Ah Xeebaha Somaliya | Berberatoday.com
Dagaal Ka Dul Socda Markab Ku Soo Caariyay Mid Kamid Ah Xeebaha Somaliya
Boosaaso(Berberatoday.com)-Wararka naga soo gaadhaya degaanka Galhagoog oo 270-KM dhanka Bari kaga began magaalada Gaalkacyo ayaa sheegaya in halkaas uu ka dhacay dagaal culusi xalay fiidnimadii.
Dagaalka oo leysu adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii maleeshiyaadka hubeysan ay isku qabsadeen Markab ku soo caariyay xeebta Galhagoog oo u dhaw Budbud.
Maleeshiyaadkan oo aad u badnaa ayaa isku qabtay cida la wareegeysa Markabka oo ahaa mid xamuul siday, waxaana lasoo sheegayaa in dagaalka ka dhashay uu geystay dhimashada hal ruux iyo dhaawaca dhowr maleeshiyo oo kala taabacsanaa labada dhan.
Markabka ayaa waxaa iminka gacanta ku haya qeyb ka mid ah maleeshiyaadka dagaalamay, waxa uuna dagaalka ka duldhacay Markabka iyo banaanka hore ee Xeebta.
Rasaas goosgoos ah ayaa waxaa laga dul maqlayaa Markabka, waxaana ilaa iyo hadda halkaasi aan gaadhin ciidamada amaanka maamulka Galmudug maadaama ay xili mugdiya tahay goobta uu ku caariyay Markabka.
Ma cadda sida uu xaalku noqon doono waxaase lasoo sheegayaa in la maqlaayo rasaas ay wali is weydaarsanayaan labada dhinac oo is horfadhiya.
Sioo kale Markabka oo usoo caarayay cilad farsamo oo dhinaca Makiinada ah ayaan warku sheegin inay saaran yihiin shaqaalihii watay iyo in kale waxase ay ubadan tahay inay saaran yihiin shaqaalihii markaba iyo badeecadii xamuulka ahayd oo aan la garanayn meel uu usiday walina aan la ogaanin.